Gemlight Cane Machete wuxuu shaqo deg deg ah ka sameeyaa burush qaro weyn, haramaha dhaadheer, geedaha canabka ah iyo laamaha balaaran, iyo waliba bakoorada iyo doorka mooska iyo qumbaha.
Sida dhammaan baalashyada 'Gemlight', waxay ku faantaa daab culus oo ka soo baxa SAE 1070 daab bir sare - oo ka mid ah kuwa ugu adag uguna fiiqsan meeraha ka dib markii la demiyo oo la xanuujiyo daaweynta kuleylka. Sidoo kale baangadaha Masaarida waxay soo bandhigaan daab ballaaran oo fiiqan oo qumman oo loogu talagalay jabsiga jirida galleyda iyo bakoorad sonkor ah. Badanaa daabku waa la qabtaa si loogu oggolaado isticmaalaha inuu uga soo baxo bakooradda la jarjaray ee dhirta wali taagan. Dhumucda qafiifka ah ee daabku waxay u oggolaaneysaa jarista si fudud iyada oo loo marayo dhirta qaabka uuska. Sidoo kale la bixi daab daab cad, sidoo kale waa tan ugu fiican. Baangadu waxay leedahay daab af leh oo fiiqan oo ugu fiican jarista iyo goynta
Waxyaabaha wax lagu maareeyo ee loo yaqaan 'Mane machete handle' ayaa had iyo jeer leh gacan 12inch dheer iyo 7inch iyo 6inch, sidoo kale walxaha alwaaxa waa alwaax adag oo china ah oo leh rivets bir ah oo go'an. Dhererka daab waa 13inch, 14inch iyo 13.5inch iyo cabbir kale oo aan sameyn karno sida la codsaday. Gacan caag ah iyo duritaanka duritaanka ayaa sidoo kale la heli karaa.
Baangadyada fagaarayaasha ayaa si ballaaran looga adeegsadaa Filibiin, Jamaica, Cuba iyo qaar ka mid ah Mareykanka. Sidoo kale, Koonfur Afrika iyo Hindiya iwm.
Summad Gemlight ama OEM / ODM Qaabka Blade Machete
Dhererka Baaxadda 12,13.5inch, 14inch Wadarta dhererka amarro
Baal Blade Ku xir ama jillaab la'aan Nooca Blade Edge Pre-Sharped
Dhumucdiisuna way Xagga Sare: 2.0mm ama OEM Faahfaahinta daab Shiidi Primary aasaasay warshadda
Astaamaha Gacanta Dareemay ama cirbad Wax ka qabato Alwaax ama Balaastik
Nadiifinta xaabada, cowska iyo laamo yaryar.
Dalagyo badan: bakoorad sonkor ah, kafee, iwm.
Mindida haanta waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa goynta bakooradda, iyo midhaha kale ee la goosto, iyo xitaa badbaadada bannaanka